प्रहरीकै कमजोर कमाण्डिङका कारण गिजोलिएको निर्मला हत्या प्रकरण नयाँ आईजीपीले समाधान गर्न सक्लान ? - Jhilko
प्रहरीकै कमजोर कमाण्डिङका कारण गिजोलिएको निर्मला हत्या प्रकरण नयाँ आईजीपीले समाधान गर्न सक्लान ?
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा बलत्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्याको सम्बन्धमा प्रहरीकै प्रतिवेदनहरु आपसमा बाँझिदा गृह मन्त्रालय अप्ठेरोमा परेको छ । यसअघि सो घटनाबारे एआईजी धिरु बस्न्यातको छानविन टोलीले सो घटनामा प्रहरीले चरम लापर्वाही गरेको तथा सो घटनाका आरोपी भनिएका दिलिपसिंह बिष्ट निर्दोष रहेको ठहर गरेको थियो । तर, हालै आएर डीआईजी सुरज केसीको अर्को पुनरावलोकन प्रतिवेदनले घटनामा प्रहरीले लापर्वाही गरेको नभई दिलिपसिंह बिष्ट नै घटनाको मुख्य दोषी रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
यसरी प्रहरीको प्रतिवेदन नै आपसमा बाझिने तथा संवेदनशील विषयमा प्रहरीले लापर्वाही गर्दा दोषको भारी गृहमन्त्रालयले बोक्नु परिरहेको छ । त्यसो त यो घटनालाई सुरुदेखि नै आफै हेरिरहेका निवर्तमान प्रहरी आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको पनि चरम लापर्वाही देखिएको छ । उनले दिएको गलत ब्रिफिङकै आधारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले निर्मला प्रकरणबारे संसद, संसदीय समिति लगायतका ठाउँमा बोल्दा विवादित बन्नुपरेको थियो । प्रहरीलाई विश्वास गर्दै गृहमन्त्री बादलले अहस्तक्षेपको नीति लिए पनि प्रहरीले निर्मला प्रकरणमा सिङ्गो गृहमन्त्रालयलाई फसाइ दिने काम ग¥यो । प्रहरीले गरेको गलत कामको दोष गृहमन्त्री र गृहमन्त्रालयमाथि प¥यो ।
पछिल्लो प्रतिवेदनले घटनाको मुख्य दोषीको रुपमा पुनः दिलिपसिंह बिष्टतर्फ सुई तेर्सिएको छ । त्यस्तै मानवअिधकार आयोगले समेत डीएनएलाईमात्रै आधार नमानी अन्य आधारमा समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसँगै दिलिपलाई पक्रिने बाटो खोलिदिएको छ । किनकि दिलिपले प्रहरी र मिडियालाई दिएको बयानमा अफूले नै निर्मलाको हत्या गरेको बताएका छन् । यस्तै उनी विगतमा हल्ला चलाइएको जस्तैे बलत्कार गर्र्न नसक्ने शारीरिक अवस्था नरहेको देखिन्छ । हुनत सुरुमा प्रहरीले उनलाई नै पक्रिएर घटनामा दोषी भएको भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो । तर, नेपाली काँग्रेस, विप्लव नेकपा, विवेकशील पार्टी लगायतका पार्टी र एनजिओ÷आईएनजिओ र कतिपय मानव अधिकार संगठनहरुले घटनामा बलजफ्ती राजनीतिको लेपन छिराएर दिलिप निर्दोष रहेको भन्दै कञ्चनपुरमा आन्दोलन अघि बढाए ।
बिष्ट पक्राउ परेपछि नै त्यहाँ आन्दोलनले उग्र रुप लिएको थियो । सोही आन्दोलनलाई सरकार विरुद्धको आन्दोलनको रुपमा काँग्रेस र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले क्यास गर्ने कोशिस गरे । कञ्चनपुर काँग्रेसका नेताहरु रमेश लेखक र एनपी साउद लगायतका नेताहरु जिल्लामा बसी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुका साटो काठमाडौँबाट आन्दोलन चर्काउन भित्री रुपमा खेल खेलिरहे । निर्मला घटना हुनुभन्दा केही दिनअघि कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा क्षेत्रबाट तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका आफ्ना एक कार्यकर्र्तालाई रिहा गर्न नमानेको रिसको झोकमा लेखक र साउदले तत्कालीन एसपी डिल्लिराज बिष्ट विरुद्ध आन्दोलन चर्काउन भूमिका खेलेको एसपी निकट स्रोतले बताएको छ । जसले आन्दोलनको क्रममा एक जना बालक शनि खुनाको समेत ज्यान गयो । आरोपी दिलिपमा भिनाजु नाता पर्ने स्थानीय एक पत्रकारले चलाएको प्रोपोगान्डाका कारण समेत कञ्चनपुरको आन्दोलनमा घिउ थपेको तथ्य अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अहिले प्रहरीको पुनरावलोकन प्रतिवेदनसँगै दिलिप बिष्ट नै दोषी रहेको र तत्कालीन प्रहरीको स्थानीय नेतृत्व निर्दोष रहेको ठहर गरेसँगै त्यसबेला कारवाहीमा परेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्ट, डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, सीआईबीका डीएसपी अंगुर जिसीलगायतलाई ससम्मान प्रहरीमा पुनर्वहाली गर्नुपर्ने दायित्व गृहमन्त्रालयको काँधमा आएको छ । यसरी विगतमा प्रहरीकै गलत ब्रिफिङ र कमजोर कमाण्डिङका कारण गिजोलिएको निर्मला हत्या प्रकरण नयाँ आईजीपी ठाकुर ज्ञवालीले सम्हाल्नुपर्ने र निचोडमा पु¥याउनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
एन आई सी एशिया बैंकको विस्तारित काउण्टर ललितपुर जिल्ला अदालत, लगनखेल, ललितपुर परिसरमा...